बुधबार किन अचानक फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द भयो ? कारण यस्तो - Koshi Online
बुधबार किन अचानक फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द भयो ? कारण यस्तो
बुधबार फेसबुक र इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ताहरुको लागि निकै पिडादायिक समय थियो । फेसबुक मात्र नभएर फेसबुक निर्माताहरुकै अर्को साईट इन्स्टाग्राम पनी केहिबेरको लागि ठप्प भएको थियो । फेसबुक इन्स्टाग्राम नचल्दा ट्विटरमा फेसबुकको समाचार यति भाइरल बन्यो कि फेसबुक नचलेको कुरा ३ अरब भन्दा धेरै ह्यासट्याग टप ट्रेण्डमा पर्न सफल भयो । के भएर यस्तो भयो त ?
फेसबुकका तत्कालका इन्जिनियर रोबर्ट जोन्सनका अनुसार यो कुनै ठुलो इस्स्यु नभएर सानो प्राबिधिक खराबी भनेका छन् । फेसबुक एउटा संबेदनसिल अंग भएकोले यसलाई ह्याक गर्न आफुले सोचे जस्तो अनुरुप नरहेको बताएका छन् ।
फेसबुक ठप्प हुँदा न त प्रयोगकर्ताले फोटो अपलोड गर्न पाए, न त कुनै स्टाटस अपडेट गर्न । यद्यपि केही समयपछि नै फेसबुक र इन्स्टाग्राम दुबै पूर्ववत अवस्थामा आएर प्रयोगकर्ताले उपयोग गर्न पाए ।
फेसबुक डाउन हुँदा कतिपय प्रयोगकर्ताको पेज नै अपलोड भएको थिएन भने कतिपयले आफ्ना अकाउन्ट लगइन गर्न पाइरहेका थिएनन् । फेसबुक लगइन गर्न खोज्दा ‘आवश्यक मर्मतका लागि फेसबुक डाउन भएको र केही समयमै पहिलेको अवस्थामा आउने र चलाउन सकिने’ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण भएको थियो।
जहाँका मानिस प्रयोग भएका भएका ‘स्यानिटरी प्याड र बालबच्चाका डाइभर’…
पत्याउनै मुस्किल : छालाबाट बनेका यस्ता विचित्रका गहना !
जहाँका मानिस मरेपछिको चाहना पूरा गर्न लाखौं खर्च गर्छन् !
‘गलत अर्थ’ लाग्ने यो तस्बिर : वास्तविकता भने अर्कै छ !
यस्तो पनि– जहाँ ‘गल्ती गर्ने’ श्रीमतीलाई एक महिनासम्म सेक्स गर्न दिइँदैन !
यस्तो देश जहाँ सोमबार पुरुषलाई ‘जे गर्न पनि’ छुट हुन्छ !